धन्यवाद सफल स्टोरिज : दुर्गा खनाल - Safal Stories
Home Safal's Columns Freedom Column धन्यवाद सफल स्टोरिज : दुर्गा खनाल
धन्यवाद सफल स्टोरिज : दुर्गा खनाल
– दुर्गा खनाल
यो पेजको माध्यमबाट मैले धेरै सफलताका कथाहरु पढ्ने मौका पाएँ । उनीहरुका सफलताका कथाहरु र अनुभवहरु पढ्ने मौका पाउँदा आभारी छु । सफलता पाउन सबैभन्दा पहिले अनुशासन, आत्मविश्वास र निरन्तर प्रयासको आवश्यकता पर्दोरहेछ । सपना सबैको हुन्छ चाहे त्यो ठुलो होस् या सानो, अनि निरन्तर प्रयासले मात्र सपना पुरा हुन्छ ।
सबैजना जित्न चाहन्छौं कोहि अरुलाई हराएर त कोहि आफैसंग जित्न चाहन्छौं । हिजो भन्दा आज उत्कृष्ट बन्न चाहन्छौं । आफूलाई जित्न चाहनेले नै जीवनमा सिक्ने मौका पाउँछ । अरुसंगको प्रतिस्पर्धाले अहंकारी बनाउँछ । अरुसंगको तुलनाले आफूलाई कि घमण्डी या निच अनुभव गराउँछ । आफू आफैसंग प्रतिस्पर्धी बन्नु नै आफूलाई अनुशासित बनाउनु हो । आफूलाई माया गर्न जाने मात्र अरुलाई माया दिन सकिन्छ । आफूलाई माया गर्नेले अरुलाई हानी कहिले पनि गर्दैन किनभने जीवन सबैको प्यारो नै हुन्छ । आफूलाई विश्वास गर्नेले अरुलाई पनि विश्वास गर्न जानेको हुन्छ । संसारमा कतिपय देश र कतिपय सम्बन्ध विश्वासले चलेका हुन्छन् । विश्वास बिनाको समाज, देश र विश्वको कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ|
हामी छोटो समयमा सफलता चाहन्छौ, कतिपय सफल व्यतिको कथा पढ्दा र उनीहरुको लगनशीलता देख्दा जित त जितेर होइन कैयौं पटक हारेर मात्र प्राप्त हुने रहेछ । ती जीवनी, ती शब्दले उर्जा त दिन्छन, प्रेरणा त दिन्छन्, तर शब्द त्यतिबेला सम्म प्रेरित बनेर रहनु पर्छ जतिबेला सम्म हामी आफ्नो सपनाको लागि अघि बढीदैन । म मेरो प्रेरणा आफैलाई मान्छु । आफू दृढ नभएसम्म कुनै बाहिरी तत्वले जीवनमा जादु गर्दैंनन् । मानिसलाई बाटो चाहिएको हुन्छ, त्यो बाटो आफूले नै बनाउने हो । आफ्नो खुशीको स्रोत आफूभित्र नै हुनुपर्छ । आफूले नगरेसम्म कसैले गर्दैन । लड्ने र लडेको ठाउँबाट फेरी उठ्नेले नै जीवनमा प्रगति गर्न सक्छ। जीवनको पथ प्रदर्शक आफू स्वयम् पनि हो ।
सजिलो हुन्छ अरुलाई दोष दिन । देश बिग्रिएमा सरकारलाई दोष, पढाई बिग्रिएमा गुरुलाई दोष, घर बिग्रिएमा छिमेकीलाई दोष, जीवन अरुलाई दोष दिदा दिदै त बित्ने होइन ? विकसित मुलुकमा हेरौ नागरिक कति जिम्मेवार हुन्छन् । संघर्षबिना जीवन कल्पनापनि गर्दैनन् । देश विकासको लागि अरुलाई दोष दिन भन्दा नि नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्दछ । हामी दोष मुक्त हुने कहिले ? समाज आफूले बनाउने हो| समाज समृद्ध भए देश समृद्ध हुन्छ। हाम्रै समाजको समूहबाट नै हो त्यो देशको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति । देशको जिम्मेवारी हाम्रै समूहबाट हुन्छ भने दोष हामीमै छ । पहिले आफू सहि भए मात्र अरुमा औंला उठाउन ठीक हुन्छ|
देशको भविष्य युवाको हातमा हुन्छ । युवालाई दिइने शिक्षामा भर पर्छ। युवालाई मानवताको शिक्षा दिनु जरुरि छ , नैतिक शिक्षाको खाँचोले आमाबुवा बुढेसकालमा एक्लिनु परेको छ । सामाजले कस्ता युवाहरु हुर्काइरहेको छ, देशपनि त्यस्तै नै बन्छ। एउटा रुख दरिलो हुन राम्रो बिऊ र उम्रिएपछि मलजल चाहिए जस्तै समाज र देश सुधारकालागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । ती युवा नै हुन् ।
“बिहानीले दिनलाई हुर्काएजस्तै
कोपिलाले बानिदिन्छ फूलको आकृति”
आजका साना कोपिला (बालबालिका) लाई मानवीयर नैतिक शिक्षाको खाँचो छ। एउटा मानवले अर्को मानवलाई बुझ्न सके मात्र कुनैपनि समाज सुखी बन्छ। आज हामी त्यहाँ छौं, जहाँ अरुको प्रगतिले हामीलाई असन्तुष्ट बनाईदिन्छ । हामी जित्न सिकाउछौ बालबालिकालाई, जितकै बारेमात्र सिकायौ भने हारको दिन के होला, त्यो कल्पना गर्न असम्भव हुन्छ । बालबालिकालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन जरुरि छ तर प्रतिस्पर्धाको नाममा जित्न र अरुसंग तुलनात्मक हुन मात्र सिकाउनु गलत हो । यसो गरे उनीहरु अहंकारी हुन्छन् । तुलनात्मक भावले नैराश्यता बाहेक केही फैलाउदैन ।
सफल स्टोरिजको प्रयास सह्रानीय छ । युवाहरुलाई मध्यनजर गरेर प्रेरणात्मक बनोस् । जीवनमा बाटो देखाउने चाहिन्छ, पथप्रदर्शक बनोस् । शुभकामना ! आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सामग्रीहरु पढ्न पाइयोस् । धन्यवाद ! असल प्रयासको लागि । तपाईको प्रयास अरुको भन्दा भिन्न र प्रशंसनीय छ ।
( तपाईंले पनि हामीले आफ्नो सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीलाई हजुरहरुको साथको खाँचो सधै हुनेछ । संगै मिलेर समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याऔं )
Previousतनावबाट बाहिर निस्कन सहयोग गर्ने भनाइहरु
Nextलु होल्जका प्रेरक भनाइहरु